ALIEXPRESS အပေါ်ဝယ်ယူမှုများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ကိုဘယ်လို - ALIEXPRESS - 2019
အသေးစားနှင့်ကျယ်ဝန်သော MicroSD ကတ် (flash ကိုကဒ်) အားလုံးနီးပါးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များကအသုံးပြုကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲဒီပြဿနာတွေကို ပို. မကြာခဏကို USB-drives တွေကိုနှင့်အတူထက်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet တုတ်ကိုမမွငျနိုငျသောအမှန်စင်စစ်နှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးအများဆုံးပြဿနာများ၏တဦးတည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဒီလိုငါတို့သည်အဘယ်သို့ထပ်ဆင့်စကားပြောပါလိမ့်မယ်, က fix ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုပေါ်တုတ်ကိုမမွငျပါဘူး
ဒီသစ်တစ်ခု MicroSD ကတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပဲသင့်ရဲ့ device ကိုမှတ်ဉာဏ်၏ဤငွေပမာဏများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါသို့မဟုတ်ယင်း၏သတ်မှတ်ချက်ကိုအသိအမှတ်မပြုလို့မရပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ဂရုတစိုက်ချောင်းကိုသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet စောင့်ရှောက်သောအရာကို ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များလေ့လာတယျ။
မှတ်ဉာဏ်ကဒ်တွင်ပျက်စီးဒါမှမဟုတ်ဖိုင်စနစ်က "ချွတ်ပျံသန်း" အမှတ်အသားများဖြစ်ပါသည်နိုငျသညျ။ ဤသည်တို့ကြောင့်မမှန်ကန်ကြောင်းပုံစံချပေးသို့မဟုတ် re-မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် device ကိုမှ Root-အခွင့်အရေးများ၏ installation ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်နိုင်ဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောကိုင်တွယ်ဖျော်ဖြေမပါလျှင်ပင်သော်လည်း, flash drive ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စုဆောင်းအမှားပဲဖတ်နေကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။
ယာဉ်မှုကြောင့်စက်မှုသို့မဟုတ်အပူထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှဆင်းချိုးသည့်အခါဆုံးမနှစ်မြို့ဖွယ်အတွေ့အကြုံကို။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အဲဒီမှာသိုလှောင်ထားသောဒေတာများပြန်လည်ပြုပြင်သို့မဟုတ် restore လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
စကားမစပ်အဆိုပါ flash drive ကိုအပူလွန်ကဲရာမှ, ဒါပေမယ့်လည်းကြောင့်ထိုသို့ပြုရာတွင်အသုံးပြုသောကိရိယာ၏မသာကိုမီးရှို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မကြာခဏစျေးပေါတရုတ်ကိရိယာနှင့်အတူအမှု, ထပ်ခါထပ်ခါပြန်အမှတ်တရများလုယူကြလော့။
ပထမဦးစွာကို flash card ကိုမှန်ကန်စွာထည့်သွင်းခြင်းရှိမရှိသေချာပါစေ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူမပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်သို့မဟုတ်ဇောက်ထိုးထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ညစ်ညမ်းမှုများအတွက် connector ကိုသူ့ဟာသူစစ်ဆေးခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါက, ညင်ညင်သာသာက clean ။
ဖုန်းဆဲကဒ်ကိုမမွငျပါဘူးဆိုရင်တစ်ကဒ်စာဖတ်သူကိုမှတဆင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ gadget ကအခြား flash drive ကို၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုစစ်ဆေးပါ။ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသို့မဟုတ်ဖုန်းအတွက် - ရလဒ်အဖြစ်သငျသညျထိုပြဿနာသည်အဘယ်အရာကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌, တရားခံတစ်ဦးမှ software ထဲမှာ bug ကို, ဒါမှမဟုတ်အဆက်အသွယ်ရိုးရှင်းစွာကျရှုံးခြင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, ကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းပညာရှင်များမှဖွင့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ flash drive ကိုသူ့ဟာသူစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဖို့ငြင်းဆန်သောအခါမူကား, သင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။ နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
Method ကို 1: သန့်စင်စနစ်ကက်ရှ်
ပြဿနာတစ်ခုဟာပြည်တွင်းရေးမှတ်ဉာဏ်ထလျှင်ဒီကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကို flash drive ပေါ်တွင်ဒေတာကိုထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပိတ်ထားပါ, တစ်ချိန်တည်းမှာလျှော့ချ (သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်) ခလုတ်ကိုကိုင်ထားပမာဏနှင့်ပါဝါခလုတ်။ mode ကိုစတင်ပါသင့်တယ် "ပြန်လည်ထူထောင်ရေး"သငျသညျအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို select ဖို့လိုအပ်ဘယ်မှာ "cache ကို partition ကို Wipe".
ထိုနောက်မှ device ကိုပြန်တင်ပါ။ အရာအားလုံးကိုပုံမှန်အဖြစ်အလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒါဟာဒီနည်းလမ်းကိုအားလုံးမတ်ဖုန်းများ / tablet များအဘို့မသင့်တော်ကြောင်းသိရသည်။ အများစုမှာမော်ဒယ်စနစ် cache ကိုရှင်းလင်းဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေ။ အချို့တွင်လည်းအခွင့်အလမ်းပေးရာဒါခေါ်ထုံးစံ firmware ကိုဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်တစ်ဦး mode မှာလျှင် "ပြန်လည်ထူထောင်ရေး" သငျသညျ, အပေါ်က command ကိုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေပြီးနောက်သင်ကံကောင်းပါစေထဲကနေနှင့်သင့်မော်ဒယ်တစ်ဦး cache ကိုရှင်းလင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဖျော်ဖြေဖို့ရာအပေါ်သူတို့၏အမျိုးအတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြောင်းမကူညီဘူးလျှင်, လာမယ့်သွားပါ။
Method ကို 2: အမှားအယွင်းများအဘို့ကိုစစ်ဆေးခြင်း
ဤကိစ္စတွင်၌၎င်း, တစ်ဦးကို PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုစ flash drive ကိုထည့်သွင်းဖို့နောက်ဆက်တွဲလိုအပ်ပါဘူး။
စနစ်အမှားများကိုများအတွက်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုစစ်ဆေးပူဇော်လိမ့်မည်ဟုအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖြစ်ကြသည်။ ပထမ option ကိုရွေးပါ။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်:
အဆိုပါ flash drive ကိုပေါ်မှာ Right-click နှိပ်ပြီးသွားပါ "Properties ကို".
အဆိုပါ tab ကို select လုပ်ပါ "ဝန်ဆောင်မှု" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အခု Check".
ဒါဟာအကြံပြုလိုတယ်နှင့်မှန်ကန်သောမကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်နှစ်ဦးစလုံးပစ္စည်းများအတွက်စစ်ဆေးမှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "Run ကို".
ရလဒ်အစီရင်ခံစာ, သင်အမှားအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ flash drive ကိုပေါ်မှာရှိသမျှ data တွေကိုမပျက်မယွင်းရှိနေပါဦးမည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: မဟုတ် flash drive ကို format နဲ့မှဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တောငျးလြှငျ, ဖိုင်များသိမ်းဆည်းဖို့ကိုဘယ်လို
Method ကို 3: Format ကို Flash မီး
အဆိုပါ flash drive ကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ဒါပုံစံသင့်လျော်သောဖိုင်များကိုကော်ပီကူးစေ့စေ့စပ်စပ်သန့်ရှင်းရေးမီဒီယာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
အတွက် flash drive ကိုပေါ်မှာ Right-click "My Computer ကို" (ဒါမှမဟုတ်ရုံ "ကွန်ပျူတာ" နှင့်ကို select "ဖောမတ်ချ".
ဖိုင်ကိုစနစ်ကသတ်မှတ်တာသေချာပါစေ "FAT32"NTFS အဖြစ်များသောအားဖြင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ စာနယ်ဇင်းများ "Start".
သတင်းအချက်အလက် recover လုပ်နည်း
သင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် flash drive ကိုဖွင့်လှစ်မနိုင်သည့်အခါပြင်းထန်ကိစ္စများတွင်, ပေါ်မှာသိမ်းထားတဲ့ဒေတာပုံစံမတိုင်မီဖယ်ရှားမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်အထူးကိရိယာများ၏အကူအညီဖြင့်သတင်းအချက်အလက်အများစုပြန်လာနိုင်ဖို့နေဆဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နမူနာအစီအစဉ်ကို Recuva ကိုပေါ်မှာဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်းစားပါ။ ထွက်သယ်ဆောင်လျှင်ပြန်လည်နာလန်ထူသာဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုသတိရပါ "လျင်မြန်စွာစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ".
program ကို run ခြင်းနှင့်တန်ဖိုးကို select "အားလုံးဖိုင်များ"။ စာနယ်ဇင်းများ "Next ကို".
ရွေးချယ်ထားသောတန်ဖိုးကို "ဟုအဆိုပါမှတ်ဉာဏ်ကဒ်တွင်" နှင့်စာနယ်ဇင်း "Next ကို".
ကလစ်နှိပ်, သင်လိုချင်တဲ့ဖိုင်တွေအထိမ်းအမှတ် "Restore" နှင့်ကယ်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
သင် program ကိုရှာမတှေ့ဘူးဆိုရငျ, သငျသညျတခု In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုင်ဖို့အဆိုပြုချက်ကိုနဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်လိမ့်မည်။ စာနယ်ဇင်းများ "Yes" ကို ကို run ရန်။
အကြောင်းပြချက်ကသင်၏ MicroSD card ကိုအခါကျနော်တို့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းများဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သစ်တစ်ခုမှတ်ဉာဏ်ချောင်းကိုများအတွက်စတိုးဆိုင်ကိုသွား - အားလုံးတခြားပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပင်ကွန်ပျူတာမြင်ရမပါဘူးဆိုရင်, သငျသညျတစ်ဦးတည်းသာအရာရှိသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: USB flash drive တစ်ခုပေါ်မှာ password ကိုထားရန်ကဘယ်လို